Dowladda Soomaaliya oo Wafdi Wasiiro ah u direysa Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in wafdi ka kooban Wasiiro in ay u dirto Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Max’ed Cabdi Xayir Maareeye Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ka warbixinyay kulankii shalay ee Golaha Xukuumadda ayaa shaaca ka qaaday in Wasiiro la soo xaajooda Maamulka KMG ah ee Jubba ay dhawaan gaari doonaan Magaalada Kismaayo.
“ Baarlamaanka Soomaaliyeed waxa uu qadariyay cabashooyinka shacabka iyaguna markii Ra’iisul Wasaaraha u tagay wanaag ayey muujiyeen waxa oo dhan waxaa Maslaxad ka keeneyso Xukuumadda Soomaaliyeed” ayuu yiri Wasiir Maareeye.
Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa dhawaan ku dhawaaqay in Kalsoonida uu kala noqday dowladda Dhexe ee dalka kadib go’aan ay ku kala dreen baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Golihii Wakiilada Maamulkaasi Jubba.